MPT Myanmar | Moving Myanmar Forwardမေ 2021 - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Month: မေ 2021
မြန်မာပြည်နှင့်အတူရှိနေပြီး ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို သုံးစွဲသူများသို့ အကောင်းဆုံး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများဖြင့် ဆက်လက်ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း MPT ကတိပြု
တယ်လီကွန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ မြန်မာပြည်သူများအကြား ကောင်းစွာချိတ်ဆက်နေနိုင်ရေးအတွက် အလွန်ပင်အရေးကြီးသည်နှင့်အညီ စဥ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပြီး အနှောင်အယှက်ကင်းသည့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို သုံးစွဲသူများက ရရှိ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် MPT က ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သန္နိဌာန်ပြုအပ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သည့် အစောပိုင်းကာလများ၌ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ မရရှိနိုင်မှုအပေါ် MPT အနေဖြင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြီး သုံးစွဲသူများ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝန်းအပေါ် သက်ရောက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် အကောင်းဆုံးကြိုးစားလုပ်ဆောင်လျက်ရှိကာ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို မည်သည့်အခြေအနေတွင် မဆို ရယူအသုံးပြုနိုင်ရေးမှာ အရေးကြီးကြောင်း ကောင်းစွာမှတ်ယူထားပါသည်။
MPT သည် သုံးစွဲသူများ၏ အဆင်မပြေမှုများကို တတ်နိုင်သမျှအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ မိုဘိုင်းအင်တာနက် မရရှိသည့်ကာလအတွင်း အသုံးပြုရန်ကျန်ရှိနေသော ဒေတာလက်ကျန်များကို ရက်(၃၀) သက်တမ်းဖြင့် ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်စေရန်နှင့် MPT ထောဘီ အစီအစဉ်ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများ၏ သက်တမ်းကျန်ရှိသည့် ထောဘီလက်ကျန် ပမာဏများ ကိုဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ဒေတာ (သို့) ထောဘီပမာဏများကို MPT မှ ဖြည့်သွင်းဆောင်ရွက်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် MPT သည် မြန်မာပြည်သူများ၏နေ့စဉ်ဘဝများတွင် မည်သည့်အခြေအနေ၌မဆို ချိတ်ဆက်နိုင်စေရန်အတွက် “ကြိုက်ရာခေါ် (Anynet), Super Double Data, Data Carry Plus နှင့် Data Shal Thone” အစရှိသောအမျိုးမျိုးသော ပက်ကေ့ချ်များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်လျက်ရှိပါသည်။
MPT သည် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် မိုဘိုင်းအင်တာနက် မရရှိသည့် အချိန်မှစတင်ကာ လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာ ဆက်သွယ်နိုင်စေရန်အတွက် မိုဘိုင်းငွေကြေး အက်ပလီကေးရှင်းများ နှင့် Microsoft Office အက်ပလီကေးရှင်းများ၊ MPT4U နှင့် MPT Pay အက်ပလီကေးရှင်းများကို နိုင်ငံအနှံ့ ဖြန့်ကျက်ထားသည့် MPT ၏ကွန်ရက်ပေါ်တွင် ၀င်ရောက် အသုံးပြုနိုင်စေမည့် နည်းလမ်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။
ယခုလို အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသည့်ကာလတွင် MPT သုံးစွဲသူများအကြား ဆက်သွယ်မှုများ အဆင်ပြေနိုင်စေရန်အတွက် ချစ်ခင်ရသူ မိသားစုများ၊ မိတ်ဆွေများ ထံသို့ မိုဘိုင်းဖုန်း အချင်းချင်း မိမိတို့၏ ဖုန်းမှလက်ကျန် ဖုန်းဘေလ်များအား လွှဲပြောင်းနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း ဝန်ဆောင်ခပေးရန်မလိုဘဲ အသုံးပြုနိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
သင့်တင့်သည့်ဈေးနှုန်းများဖြင့် မိုဘိုင်းဒေတာများ၊ ကြိုက်နှစ်သက်ရာပက်​ကေ့ချ်များကို ဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက် MPT ၏ကွန်ရက်ဖြင့် အချိန်မရွေး အသုံးပြုနိုင်သည့် MPT4U အက်ပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီ သည့် ဒေတာပက်ကေ့ချ်များကို ရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
MPTအနေဖြင့် သုံးစွဲသူများ ပိုမိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အတွက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွား မည်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးပေးအပ်ထားသည့် ကမ်းလှမ်းချက်များ၊ သတင်းများ၊ MPT ၏အနာဂတ်ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုချင်းစီတို့ကို MPT ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် မိုဘိုင်းချိက်ဆက်မှုကို အသုံးပြု၍ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
MPT သည် ပြည်တွင်းရှိ ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာတစ်ခုအဖြစ် နှစ်ပေါင်း ၁၃၀ ကျော်ကြာ မြန်မာပြည်သူလူထုသို့ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး တည်ငြိမ်သော ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု နှင့်သုံးစွဲသူများ၏ စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိရန် ဆက်လက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
Author ThazinPosted on မေ 24, 2021 မေ 24, 2021 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
MPT MPT ထောဘီ အစီအစဉ်ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများသို့ အသိပေးကြေညာချက်
MPT ထောဘီ အစီအစဉ်ဝယ်ယူသုံးစွဲသူ မိဘပြည်သူများအနေဖြင့် မိုဘိုင်းအင်တာနက်ပြတ်တောက်မှုကာလအတွင်း အသုံးပြုရန်ကျန်ရှိနေသော ထောဘီလက်ကျန်ပမာဏများအပေါ်တွင် ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးသည့်အနေဖြင့် ဒေတာ (သို့) ထောဘီပမာဏများကို ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ထည့်သွင်းပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ *224#ကိုခေါ်ဆို၍ လက်ကျန်ပမာဏအား စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ MPT အနေဖြင့် သုံးစွဲသူများအား ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးအပ်နိုင်ရန် အစဉ်အမြဲအလေးထား၍ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ MPT ကိုရွေးချယ်မှုအတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။
Author ThazinPosted on မေ 20, 2021 မေ 26, 2021 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
MPT မိုဘိုင်းအင်တာနက်သုံးစွဲသူများကို ကြေညာချက်
လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေသော မိုဘိုင်းအင်တာနက် ပြတ်တောက်မှုအခြေအနေကြောင့် သုံးစွဲသူများအား ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးသည့်အနေဖြင့် ပြတ်တောက်မှုကာလအတွင်း အသုံးပြုရန်ကျန်ရှိနေသောဒေတာလက်ကျန်များကို ရက် ၃၀ သက်တမ်း ဖြင့်ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်စေရန် MPT မှ ထည့်သွင်းပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ ဒေတာလက်ကျန်ကိုသိရှိလိုပါက *224# ကိုခေါ်ဆို၍စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။အခြေအနေများကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားမည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများသို့အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်သွားနိုင်ရန် MPT မှ လုပ်ဆောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ MPT ကို ရွေးချယ်မှု အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ MPT ကသင်နှင့်အမြဲအတူရှိနေပါသည်။
Author ThazinPosted on မေ 4, 2021 မေ 6, 2021 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
၁) ဒေတာပမာဏ ဘယ်လောက်ပြန်ပေးမှာလဲ?
MPT သည် မိုဘိုင်း အင်တာနက် ပြတ်တောက်မှု အခြေအနေ ကြောင့် သုံးစွဲသူများအား ပြန်လည် ဖြည့်ဆည်း ပေးသည့် အနေဖြင့် ပြတ်တောက်သည့် ကာလအတွင်း အသုံးပြုရန် ကျန်ရှိနေသော ဒေတာလက်ကျန်များကို ရက် ၃၀ သက်တမ်း (FYI: သက်တမ်း ၃၀ရက်မှ ၇၇ရက်) ဖြင့် ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂) ဘယ်တော့လောက် data ခံစားခွင့်ကို ရရှိမှာပါလဲ?
100MB အထက်ကျန်ရှိနေသော users များသည် ဧပရယ် ၃၀ ရက်နေ့ ၂၀၂၁ မှစ၍ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မှတ်ချက်။ ။ 100MB အောက်ကျန်ရှိနေသော users များကို နောက်အပတ်အတွင်းပြန်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃) ဘယ်တော့လောက် ထောဘီ ခံစားခွင့်ကို ရရှိမှာပါလဲ?
မေလ ၆ရက် နေ့ ၂၀၂၁ မှစ၍ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေး မှာဖြစ်ပါတယ်။
၄) လက်ကျန်ပမာဏကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်မှာလဲ?
*224# ကို ခေါ်ဆိုပြီး လက်ကျန်ပမာဏနှင့် သက်တမ်းကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
၅) ဘယ်ပက်ကေ့ချ်တွေကို refund ပေးမှာလဲ?
မတ်လ ၁၅ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားစဥ် ကာလအတွင်း အသုံးပြုရန် ကျန်ရှိနေသော ဒေတာပက်ကေ့ချ်များ၊ ထောဘီပက်ကေ့ချ်များ ပါဝင်ပါတယ်။ ထိပေါက်ဘောနပ်စ်များ၊ VAS bundle packs များ၊ BTL/Special offer packs များ ပါဝင်ပါတယ်။ (MLBB pack, Free Night Facebook (Data Carry Plus), First Recharge Welcome Bonus) များ မပါဝင်ပါ။
၆) စုံစုံလင်လင်ပက်ကေ့ချ်ဝယ်ယူထားပါတယ်။ အကန့်အသတ်မရှိဒေတာအသုံးပြုမှုများအတွက် ဘာအကျိုးကျေးဇူးရရှိမှာပါလဲ?
စုံစုံလင်လင် အတွက် ခံစားခွင့် နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ပထမတစ်မျိုးက Main data အတွက် refund ဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယတစ်မျိုးက Unlimited benefits အတွက် refund ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Unlimited benefits(FB, ML, Viber, IG, Joox) အစား စုံစုံလင်လင် Mini users အတွက် Bonus data တစ်ရက်ကို 100MBဖြင့် (ရက်၃၀သက်တမ်း) ၊ စုံစုံလင်လင် original users အတွက် Bonus data 200MBဖြင့် (ရက်၃၀သက်တမ်း) ၊ စုံစုံလင်လင် Maxi users အတွက် Bonus data 400MBဖြင့် (ရက်၃၀သက်တမ်း) များကို ပြန်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၇) စုံစုံလင်လင် Mini ပက်ကေ့ချ်ဝယ်ယူထားပါတယ်။ အကန့်အသတ်မရှိဒေတာအတွက် ဘယ်လို refund ပြန်ရမှာလဲ?
SSLL mini users တွေအတွက်အင်တာနက်ပြတ်တောက်နေစဥ်အတွင်း အသုံးပြုရန် ကျန်ရှိနေသော main data + Unlimited benefits အစား တစ်ရက်ကို 100MB စီ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ E.g. 200 MB remaining data (30D) + 100 MB per day for 30 days. Remark: 100MB per day for 30 days အတွက် Schedule ကို fixed မလုပ်ထားပါ။
၈) စုံစုံလင်လင် Original ပက်ကေ့ချ်ဝယ်ယူထားပါတယ်။ အကန့်အသတ်မရှိဒေတာအတွက် ဘယ်လို refund ပြန်ရမှာလဲ?
SSLL original users တွေအတွက်အင်တာနက်ပြတ်တောက်နေစဥ်အတွင်း ကျန်ရှိနေသော main data + Unlimited benefits အစား တစ်ရက်ကို 200MB စီ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ E.g. 400 MB remaining data (30D) + 200 MB per day for 30 days. Remark: 200MB per day for 30 days အတွက် Schedule ကို fixed မလုပ်ထားပါ။
၉) စုံစုံလင်လင် Maxi ပက်ကေ့ချ်ဝယ်ယူထားပါတယ်။ အကန့်အသတ်မရှိဒေတာအတွက် ဘယ်လို refund ပြန်ရမှာလဲ?
SSLL Maxi users တွေအတွက်အင်တာနက်ပြတ်တောက်နေစဥ်အတွင်း ကျန်ရှိနေသော main data + Unlimited benefits အစား တစ်ရက်အသုံးပြုခွင့်အတွက် 400MB စီ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ E.g. 500 MB remaining data (30D) + 400 MB per day for 30 days. Remark: 400MB per day for 30 days အတွက် Schedule ကို fixed မလုပ်ထားပါ။
၁၀) DaVo packs ကိုဝယ်ယူထားပါတယ်။ ဘယ်လို refund ပြန်ရမှာလဲ?
DaVo pack users တွေသည် data refund တမျိုးကို ပဲ ပြန်လည်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Voice refund မရရှိနိုင်ပါ။ e.g. တစ်ရက်အသုံးပြုခွင့် 1GB စီနှင့် ရက်၃၀ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၁) VAS bundle data pack (PUBG/Tay Than Thar/JOOX/Shal Kyi) ကိုဝယ်ယူထားပါတယ်။ ဘယ်လို refund ပြန်ရမှာလဲ?
VAS pack users တွေအတွက်အင်တာနက်ပြတ်တောက်နေစဥ်အတွင်း အသုံးပြုရန် ကျန်ရှိနေသော main data ကို ပြန်လည်ရရှိမှာပါ။ ပက်ကေ့ချ် ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် code (PUBG game item) or premium access link (JOOX, Tay Than Thar/Shal Kyi)ကို SMS ကနေတစ်ဆင့်ရရှိပြီးဖြစ်၍ ထပ်မံ share မည်မဟုတ်ပါ။
၁၂) Mobile Legend data pack ကိုဝယ်ယူထားပါတယ်။ ဘယ်တော့ refund ပြန်ရမှာလဲ?
Mobile Legend data များသည် Mobile legend အတွက်သာ အသုံးပြုနိုင်သည့်အတွက် internet ပြန်ရသည့်အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည် data များကို refund ပြန်ပေးနိုင်ရန် စဥ်းစားပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။
Author ThazinPosted on မေ 3, 2021 မေ 6, 2021 Categories Uncategorized